SingForYou.net - Shwe Yaung A Shone
Shwe Yaung A Shone
Tags : MH and .. ?
By : MH on Feb 24, 2010
Score: 130 Rating: 5.00 Comments: 56
Shwe Yaung A Shone's Description
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ.... ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အတွဲချောင်း အာ....ဆောတီး .. စုံတွဲသီချင်းလေးပါ။ အတူဆိုပေးတဲ့ ညီမလေးကိုတော့ ဘူလဲဆိုတာ သိကြမယ်ထင်တာပဲ ။ တို့ကတော့ ပြောပြဘူး ။ ထုံးစံအတိုင်း သီးခံတော်မူပြီး အားပေးကြပါ။
alwaysonglover on Feb 28, 2010 0
kaung lite tat Dute lay par pal . mama athan ka ayan kaung par tal shint :)
alinyoung on Feb 27, 2010 0
always encourage to you..............
wowww..d duet song lay laeayan kg tal byoo...2 yout lone so htar tar good tal ...bro MH yaw sis lay kiss kaw...ta kal kg tarr ..arr pay twer par tal shinn.********************************for both of u
sorri for my late comment..... ma nait ka ma yout pit loz.. khu ma lar ment ya par te.. lsiten p tar..tin te nait ka hte ka pelz lay.. ta din ya htar loz par...aheeeeee:))))))))))) sai MH nelz white mama tot arr...asho tawamix taw lon thaw kyaung million starz chee myint lite par kyaung chint...nout lelz mar g sho par own nawt.. arr pay kyin loz par.....>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
thuyeekg on Feb 25, 2010 0
ရဲဘော် ဆက်လုပ် ဟိဟိ အရှေ.မျာ မိုင်းဘုံး ရှိတယ် အားပေးသွားတယ်ဟေ့။
MH on Feb 25, 2010 0
YES SIR .... ရဲဘော်က အဲမိုင်းတွေ တမင်ရှာနင်းနေတာလေ ။ ဟိဟိ ... မိုင်းရှင်း တပ်ဖွဲ့ကလေ ။
paradise on Feb 25, 2010 0
MH gyi ne' kisslay yay...so htar tarayan ko kg par dal....mix htar lal taw dal.....try more duet brother.....That was great performance..******
အဲလို အဲလို တွေမြှောက်ပေးနေကြတာကိုး .... ဒီကလဲ ဖိုး .ကချင်နဲ့တွေ့ပြီ ဟိဟိ ။
Minkha on Feb 25, 2010 0
wow.... bro nae sis yay..... ayan ko kg lonn par tal byo!...... arr pay nar sin twar par tal byar....... ************* twayamyar kyi pay khae p bro nae sis !...... >>>>>>>>>> Minkha~!
ဘရာသာရေ .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နောင်လဲ အားပေးပါဦး ။
darhayhso on Feb 25, 2010 0
SIS kiss lay yay.... really dont know that... i saw that song so long.lol...sorry for late comment... both of u great job... sis ur vc is still cute,,,bro u hv strong vocal...5***************
နောက်ကျသေးဘူး မှီတယ် ဘရာသာ ။ အချိန်မှီလာရောက်အားပေးသွားတော့ ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ ။
jennifer on Feb 25, 2010 0
Great singing with perfect vocal from2of your amazing voice!!<<<<(((____0-0_____)))>>>>
<<<<(((____0-0_____)))>>>> ဟိဟိ ကိုဗားမားကြီးသင်ပေးတာ ။ ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ။
u4gyi on Feb 25, 2010 0
Both guys are sing perfect.. nice duet song one... *****
ဘရာသာကြီး ... thank နော်
sweetorchid on Feb 25, 2010 0
ကောင်းတယ် ကို MH and WhitKisslay yae တကယ်ကို ကောင်းတာပါ..လိမ်ဘူး...
လိမ်ရဘူး ဟုတ်တယ် အမှန်အတိုင်းပြောတာ ကျေးဇူးတင်ပ ။ :P
thant on Feb 25, 2010 0
ayann ko kg nay yaw bae.........aso kg tae bro MH nae white lay bae.......*******
မမသန့် ... လာဦးမယ်နောက်ထပ်တွေ အားပေးနေနော် ။
brownlay on Feb 24, 2010 0
very nice duet.. ********** for both of you!
မညိုရေ ... ကြိုးစားပါဦးမယ်ဗျာ ။
hippo on Feb 24, 2010 0
သိပါ့ သိပါ့ ... ***** for both of you naw ... :)))))
အွန် ... ဟစ်ပိုတို့တော့ သိနေတာပဲ ။
AngelShaper on Feb 24, 2010 0
အားပါးးးးတော်လိုက်ကြတာနော်။ စတားစ်တွေနဲ့ အားပေးသွားပါတယ်နော်။
skywalker on Feb 24, 2010 1
ဒဿကြီးရေ...မယ်သီတာနှင့် ဟုတ်ဘူးလားကွ..ဟိဟိ.. ခေါင်းတစ်လုံးလောက်ငှားစမ်းပါကွာ..ငါမူးတာအဖေါ်မရှိလို့ ပျင်းသဟ...သီချင်းလေးနားထောင်ရင်းလွမ်းချင်လာပြီ..ဘာကိုလွမ်းရမလဲ ကွ..ပြောစမ်းပါဦးကွာ.....
လုပ်ပါနဲ့အေ ရှိတဲ့ခေါင်းဆယ်လုံးထဲက ကိုးလုံးက မယ်သီတာ့လက်ချက်နဲ့ ဆေးရုံပို့ထားရတယ်။ ဒီတလုံးတောင် လူမြင်ကောင်းအောင်ချန်ထားပေးပါလို့ မနဲပြောထားရတာ။ နင့်ငှားလိုက်လို့ပြန်မပေးရင် ဒဿဂီရိက ခေါင်းပြတ်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ ။
whitekisslay on Feb 25, 2010 0
Rocker...ku ta laww rock rock rock pe hawt song layy tay ma listen ya tar char par p ***.....alwann tayy pyay pe myar myar rock ng par say taw.....aheee:))))))))))thX par ***>>>>>>>>>>
Ilovemusic on Feb 24, 2010 0
MH gyi nae...WH lay toe yay...really great singing ....very nice to listen par....5*4two of u....nor.
ကိုချစ်.... တပုဒ်လောက်ဆွဲရအောင် အမြည်းလေးဘာလေးယူခဲ့ ။
Narr sin arrr payy twer te koko chit..ahee:P>>....cp for MH bro......million thzzzzzz par Ako music yay:))))
Thanzinchitthu on Feb 24, 2010 0
good tal bro &sis toe yay..arr pay nar sin twar par tal *********************
Bro g .....million starzzzzz for all of us..:)))))))))
rainmouse on Feb 24, 2010 0
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ....bro and sis ရေ...
THZ PAR.....rain ...naut lelz larr arrr payy par ohnn nawttt>>>>>>>>>>>>
turikimuriki on Feb 24, 2010 0
wow... really nice duet par bro MH & sis kiss lay yay ... enjoy it ... million stars from me ... :)))))
ကျေးဇူး UPG အဲ ... သူ .....ရ......ကီ
sannmya toe2yaut lone ka lal sis layy turik ko kyaezuu akyii gyi tin par tal shint:)))))))))))))))
saikyaw on Feb 24, 2010 0
တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်.. ဆိုဟန် ဆိုပေါက် အသံအား... အသံ ကလဲ unique ဖြစ်တယ်....နောက် ပွဲတွေ လုပ် ရင် ခေါ် ဆိုမယ် အို ခေလား..
ဘီယာသာအ၀တိုက် မိုးလင်းပေါက်ကို ဟဲမယ် ဘရာသာရေ ။
Hut tal layy.....Mixer gyii ka aso yaw taw tawtt arr lone asinnn pyaw twer tar poptttt lol bro g yelzzz....u welcome par shittt:)
lalaynge on Feb 24, 2010 0
ကိုကြီး MH ကွာလာတီတက်လာပီ မလှနဲ့ လဲ ဟုတ်တော့ဘူးးး ကောင်းတယ်ကွာ ဆိုသွားတာ၂ယောက်လုံးး ၁ယောက်စတား၅လုံးးပေးခဲ့တယ်..
ရန်စနေတာလား ရန်စနေတာလား ဒီကလဲနှုတ်သီကောင်း လျှာပါးနော် ဟင်းဟင်း
Mama nyi tu mya tu nor ..starzz ka aheee:)))..a htoo pin kyae zuuakyii g tin shi par kyaung pyaw lo par tal shint....>:P
aungtun1 on Feb 24, 2010 0
wow,, another Great duet song of Bro MH....... Bro yaw sister whitekisslay yaw,,, you both sang beautifully,,,,song lay ko lal kyite tal,,, bro and sister so hter tar lal ta gal ko kaung tal , Arr pay par tal,bro and sister,,,,,Please sing some more duet songs ,bro and sis,,,,,,Arr pay nay par mal *********************
အကိုအောင်ထွန်း အမြဲတမ်းအားပေးနားဆင်ပေးတဲ့ ကျွန်တော့်ဘရာသာကို ကျေးဇူးဗျာ။
F1 bro AT yal...bro & sis layy pal layy hote bu larr:))da laut taw shi mhar pop nor.....maung na mha tay ko narr sinn way phan arrr payy twer tar ko kyaezuu tin par tal shint:)))naut pine lal try kyi par ohn mal nor!
Zmg on Feb 24, 2010 0
good tal byoooo...listen arr pay twar par tal..****************for bro n sis
ကဲ ဘရာသာရေ ...သူပြောသလိုပဲနော်
whitekisslay on Feb 24, 2010 0
kyaezuu bro..&kyaezuuu tin par tal shin :)))))bro zmg!
achitsonethu on Feb 24, 2010 0
မိုက်တယ်ရှင့် ဆိုသွားတာ အားပေးသွားပါတယ်
ဂယ်လားဂယ်လား လူကြီးကို ညာမပြောရဘူးနော် ။
1st time narr sinn arr payyy twer tal....achitsone thu layy chuu yayy kyazuu tin par tal shin:)